Twist (2021) – Gold Channel Movies
London's favorite thief is all grown up.Jan. 22, 2021United Kingdom90 Min.R
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရသစုံခံစားရမယ့် Twistဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Oliverဆိုတဲ့ဖိတဆိုးကောင်လေးဟာ ပန်းချီဆရာမဖြစ်သူမိခင်Mollyနဲ့အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ Mollyဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက Oliverကို ပန်းချီပညာသင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းချီအတူဆွဲရတဲ့နေ့တွေက သာယာခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ကံတရားက MollyကိုOliverရဲ့ဘဝထဲက ဆွဲထုတ်သွားခဲ့တာကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့သွားတဲ့ Oliverတစ်ယောက် Graffiti artistတစ်ယောက် climberတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Oliverဆိုတဲ့နာမည်ပျောက်ပြီး အားလုံးကသူ့ကို Twistလို့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့။ ရဲတွေကိုလှည့်စားပြီး နောက်ပြောင်ထွက်ပြေးတတ်တဲ့Twistတစ်ယောက် Faginတို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ နာမည်ကြီးပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ခိုးယူဖို့ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။
FaginကDr. Losbernကိုမှ ပစ်မှတ်ထားနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ Faginကရော ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေမလဲ။ Sikesကရော Red နဲ့ Twistရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ဘယ်လိုတွေကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှာလဲ။ နောက်ဆုံးမှာ အမှုတွေအားလုံးကို Twist,Redနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်စု ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီTwistဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှူလိုက်ရအောင်ပါ။
Review by Mary Christ
Translated by MaryChrist
IMDb Rating41,697 votes
Download G Drive SD Myanmar 441mb